मोरङको बेलबारी नगरपालिका वडा नं. ४ कि दलित महिला वडा सदस्य हुन्, आनन्द मोते । स्कूले जीवनमा जनसाँस्कृतिक मञ्चहरूमा नृत्य प्रस्तुत गर्दै राजनीतितिर होमिएकी मोते वि.सं. २०५३ सालमा वैवाहिक बन्धनमा बाँधिएसँगै राजनीतिक यात्रामा झन् सक्रिय भएर लागिपरिरहेकी छन् । दलित महिला वडा सदस्यमा निर्वाचित हुनुभन्दा अघिबाट नै सामाजिक सेवामा सक्रिय रूपमा मोतेसँग कोशी अनलाइनले गरेको कुराकानीको सार……
दसैं कत्तिको रमाइलो भयो ?
दसैं राम्रो रहृयो । श्रीमान् वैदेशिक रोजगारीका लागि बाहिर हुनुहुन्छ, यसैले उहाँ यसपाली आउन सक्नुभएन । छोरा पढ्न धरान बस्छ । छोरी विराटनगरमा पढ्छिन । दसैंमा परिवारका सबै सदस्यहरू भेला भयौं । आफन्त बित्नुभएकाले टीका, जमरा लगाउन त भएन तर खानपान र भेटघाट रमाइलो भयो ।
आजभोलि वडातिर नै व्यस्त छु । वडा कार्यालयमा आउनुभएका वडावासीहरूलाई सक्दो सहयोग गरिरहेको छु । भोट हालेर जिताउनुभएको छ, यसैले केही गर्छ भन्ने आशाले वहाँहरूको समाधान हुने गरि उठान गरिरहेको छु । मेरो क्षेत्रमा ७ वटा टोल विकास संस्थाहरू पर्छन् । सबै संस्थाहरूसँग समय मिलाएर छलफल कुराकानी गरिरहेको हुन्छु । समाजमा कहिलेकाहिँ मानिसहरूबीच मनमुटावहरू हुन्छन् । त्यस्तो बेलामा मध्यस्तकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्दै समस्याको उचित समाधान गर्ने प्रयास पनि गर्छु । वडावासी वृद्घ आमाबुबाहरूलाई भत्ता सजिलो तरिकाले वितरण गर्न सहजीकरण पनि गरिरहेको छु । वडामा विभिन्न तालिमहरू भइरहेको हुन्छ, त्यसमा पनि सहभागी भइरहेको छु ।
तपाईँ बेलवारी नपाको वडा नं. ४ को दलित वडा सदस्य हुनुहुन्छ, दलित समुदायका लागि के–कस्ता कामहरू गरिरहनुभएको छ ?
दलित तथा महिला प्रतिनिधी भएको नाताले दलित तथा महिलाहरूको विकास एवम् उत्थानका लागि के गर्नु पर्छ, कस्तो सहयोग गर्दा उहाँहरूको जीवनस्तर राम्रो हुन सक्छ त्यहीँअनुरुप सहयोग गर्ने गरेको छु । अब दलित समुदायको हकमा उहाँहरू राज्यबाट प्राप्त सेवासुबिधाहरूबाट बञ्चित हुनुहुन्छ । त्यसैले म आफैं दलित वस्तिहरूमा गएर कसरी सेवासुबिधाहरू राज्यबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ भनिरहेको छु । धेरैजसो दलित समुदायका बालबालिकाहरू जन्मदर्ताविहीन भएकाले स्कुल भर्ना हुन पाइरहेका छैनन् । त्यसैले जन्मदर्ता बनाउन पर्छ भत्रे कुराहरू अभियानकै रूपमा नभए नि मेरो क्षेत्रभित्र पर्ने गाउँ, टोलहरूमा आफैँ बुझाउँदै हिँडिरहेको छु । अहिले जनतासँग नगरपालिका कार्यक्रम नि सुरु भएको छ । यो कार्यक्रमा विपत्र तथा दलित परिवारहरूलाई के–कस्तो सहयोगको खाँचो छ त्यसको पहिचान गरी आवश्यक सहयोग पनि गरिरहेको छु । यहीँ कार्यक्रमअन्तर्गत आर्थिक रूपमा विपत्र दलित परिवारहरूलाई ट्युबवेल प्रदान गरेका छौँ ।
वडाका महिलाहरूका लागि चाहिँ तपाईँले अहिलेसम्म कस्ता कार्यक्रमहरू माग गर्नुभएको छ ?
धेरैजसो हामी महिला आर्थिक रूपमा पुरुषको भर पर्छौँ । त्यही भएर महिला पनि आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भत्रे योजनासहित वडामा महिलाहरूलाई उद्यमी बनाउने हिसाबले सिलाइ–कटाइ र ब्युटी पार्लरको तालिमहरू प्रदान गरेका छौँ । खासगरी आर्थिक रूपमा विपत्र, पिछडिएका दलित महिलाहरूलाई आत्मनिर्भर हुनका निम्ति हामीले यस्तो तालिम प्रदान गरेको हौँ ।
यस्तो कार्यक्रममा महिला सहभागिता कस्तो पाउनुभयो ?
अहिले महिलाको उपस्थिती एकदमै उत्साहप्रद छ । धेरै महिलाहरू आफैं तालिमबारे जानकारी पाएर आउन थाल्नुभएको छ । तर, हामीले लक्षित गरेको वर्ग जो आर्थिक हिसाबले कमजोर हुनुहुन्छ, पिछडिनुभएको छ, जसलाई तालिमहरू बारे जानकारी छैन, उहाँहरूलाई घरमै गएर जानकारी गराएर तालिममा सहभागी गराउने गरेका छौँ । आजकाल चाहिँ बाटोमा भेट्दा, कतिले फोन गरेरै पनि केही तालिमहरू आएको छ कि भन्दै सोध्नुहुन्छ ।
वडामा महिला प्रतिनिधिहरूदुई जना मात्र हुनुहुन्छ, तपाईँहरूले उठान गर्नुभएको प्रस्तावहरू कत्तिको सुनुवाइ हुने गरेको छ ?
हामीले पेश गरेका प्रस्तावहरू अहिलेसम्म चाहिँ नजरअन्दाज भएका छैनन् । मसँगै महिला वडा सदस्य अलहनदेवी खवास हुनुहुन्छ, वहाँ पनि वडाका निम्ति आवश्यक पर्ने र चाहिने प्रस्तावहरू अडिग भएर पेश गर्नुहुन्छ । म पनि हाम्रो समाज, गाउँ, टोल, वडामा एकदमै खाँचो परेका चिजहरूको मात्र प्रस्ताव गर्ने भएको हँुदा अहिलेसम्म सुनुवाइ भइरहेको छ । फेरि हाम्रो राजनैतिक विचारधारा र पार्टी पनि एउटै भएकोले पनि त्यसरी मिचेर प्रस्ताव नसुत्रे चलन भने अहिलेसम्म छैन र हुँदैन भत्रे कुरामा म विश्वस्त छु । सबैको छलफल, सल्लाहअनुरुप नै कार्यक्रम, योजनाहरू निर्माण भइरहेका छन् ।
वडा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि अहिलेसम्म वडावासीहरूबाट कस्तो प्रतिक्रिया पाइरहनुभएको छ ?
सबैले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिइरहनुभएको छ । म अगाडिबाट नै सामाजिक सेवामा सक्रिय भएर लागिपरेको हुँदा प्रायः सबै वडावासीहरूमा परिचित छु । त्यसैले मलाई उहाँहरूले आफ्नो समस्या, अफ्ठ्यारा, अनि विचारहरू राख्न धकाउनु हुन्न । यसले मलाई काम गर्न अझ सहज बनाइदिएको छ । मेरो सहयोगी व्यवहारप्रति उहाँहरू निकै खुशी पनि हुनुहुन्छ । राम्रो गर्दैछौँ, अझै राम्रो गर्नु भनेर सबैले सल्लाह, सुझाव दिइरहनुभएको छ ।
वडा सदस्य भएपछि व्यस्तता पनि बढ्यो होला, परिवार र आफ्नो कार्यप्रति कसरी समय मिलाउनुहुन्छ ?
श्रीमान् वैदेशीक रोजगारीमा देशबाहिर हुनुहुन्छ । छोराछोरी अध्ययनको शिलशिलामा घरबाहिरै बस्छन् । घरमा म एक्लै हुन्छु, तर प्रायः बाहिर निस्कने काम परिरहेको हुन्छ । कुनै कुनै दिन त खाना खाने फुर्सदसमेत हुँदैन । बिहानै उठेर घरका सबै काम सक्ने गरेको छु अनि दिउँसो वडा कार्यालयतिर नै हुन्छु । कार्यक्रम, बैठक, तालिम अनि गाउँ, टोलमा वडाकै कामले हिँडिरहेको हुन्छु । आफ्नो त रोजाइ नै राजनीति र सामाजिक सेवा हो ।
तीन वर्ष अझै बाँकी छ, बाँकी कार्यकालमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ ?
अहिलेसम्मको कार्यप्रति सबैजना सन्तुष्ट नै हुनुहुन्छ । अहिलेसम्म जसरी आफ्नो वडाको भलाइ र विकासका निम्ति काम गरिरहेको छु, आगामी दिनमा पनि मेरो भूमिका सशक्त नै रहनेछ ।
प्रस्तुति : बबिता लिम्बू, (प्रशिक्षार्थी पत्रकार, कोशी अनलाइन)